महंगो अस्ट्रेलियन डलरको प्रभाव | Sima Pari
Home / Article / महंगो अस्ट्रेलियन डलरको प्रभाव
महंगो अस्ट्रेलियन डलरको प्रभाव
Posted by: admin in Article Leaveacomment
डा. कृष्ण हमाल
झन्डै तिस बर्ष भन्दा पहिले अस्ट्रेलियन डलर अमेरिक्न डलर भन्दा महँगो थियो। तर अस्ट्रेलियन सरकारले डेसेम्बेर १९८३ मा अस्ट्रेलियन डलरलाई फ्लोटिङ सिस्टममा राखे पछी अस्ट्रेलियन डलरको भाउ घटेर गयो । १९८०-८१ मा एक अस्ट्रेलियन डलर बाराबर १ डलर १७ सेन्ट्स अमेरिक्न डलर हुन्थ्यो (ग्राफ्-१)। अस्ट्रेलियन डलरलाई फ्लोटिङ सिस्टममा राखेपछी यसको भाउ घट्दै घट्दै गएर सेप्टेमबर २००१ मा एक अस्ट्रेलियन डलर बाराबर ४९ सेन्ट्स अमेरिक्न डलर हुनपुग्गो। सस्तो अस्ट्रेलियन डलरको साथै चीनको द्रुतगतिको आर्थैक बिकासलेगर्दा अस्ट्रेलियन खनिज पदार्थह्र को माग बडेर गयो ।यसरी माग बडेर जानाले विस्व बजारमा अस्ट्रेलियबाट खनिज पदार्थह्र्हरुको खरिद्को लागी अस्ट्रेलियन डलरको माग बडेर गयो र यसलेगर्दा अस्ट्रेलियन डलरको मुल्यमा बृदी आउन थाल्यो ।
मानिषहरुले अष्ट्रेलियन डलरलाई चीनको आर्थिक विकासको माप दण्ड को रुपमा पनि लिनेगरेकोछ । अर्थत जसै जसै चीनको आर्थिक विकासको बृदी दर बड्दै जान्छ, त्यसै त्यसै अस्ट्रेलियन डलरको मुल्य पनि बड्द्छ । यो हुनुको मुख्य कारण चीनको बिकासको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ जस्तै कोयला, फलाम्, स्टील आदी औस्त्रेलिया बाटै चीनमा लागिन्छ् । यसै कारणले गर्दा अस्ट्रेलियन मा रिसोर्स बुम हुनगएको हो ।
तर हालको समयमा युरोपमा भैइरहेको ॠणको समस्याले गर्दा चिनमा पनि तेस्को नराम्रो प्रभाव पर्ने देखिन्छ् किनकी युरोप चीनको सबैभन्दा ठुलो ब्यापारिक पार्टनर हो । हाल मा प्रकाशित चीनिया तथ्याण्क हरुले चीनको औधोगिक उत्पादन तथा ब्यापारको परिमाण मा गिरावट देखाएको छ् । यसै कारणले गर्दा भर्खरै मात्र संसारको ठुला माइनिङ कम्पनीहरु मध्य पर्ने विएचपी कम्पनिले अफ्नो ठुलो प्रोजेक्ट स्थगित गरेको छ् ।
पहिलो पल्ट नेपाली रुपैयाँको सुरुवात सन् १९३६ म भएको हो । तेसभन्दा अगाडी चन्दी को मोहर चलन चल्तिमा रहेको थियो । तेसै कारणले रुपैयाँलाई मोहरु पनि भनिने गरिन्थ्यो । सन् १९९३ मा नेपाली रुपैयाँ लाई भारतिय रुपैयाँ सँग १ भारतीय रुपैयाँ बाराबर १ ।६० नेपाली रुपैयाँ म स्थिर (पेग्ड्) रखियो जस्ले गर्द भ्रतिय रुपैयाँको बिस्व बजारमा उतार चडाव हुँदा नेपाली रुपैयाँको पनि उतार चडाव हुनजन्छ् ।
यूरोपियन ऋण समस्या, अमेरिकाको आर्थिक मन्दी तथा चीन र भारतको आर्थिक प्रगति दरमा कमीले गर्दा लगानी कर्ताहरू बडी नर्वस भइरहेका छन् । अत: उनिहरुले आफ्नो लगानी भारत बाट झिकिरहेक छन् जस्ले गर्दा भारतिय रुपियाँ को माग मा कामी आएको छ्। फलत्: भारतिय रुपियाँ को अवमुल्यन भएर गएको छ्। तसले गर्दा नेपाली रुपियाँ को पनि अवमुल्यन भएर गएको छ्।
नेपाली अर्थतन्त्र पनि देश्मा भइरहेको राजनितिक अस्थिर्ताले गर्दा एकदमै मन्द गतिमा बडी रहेको छ्। बिदेशी लगानी कर्ताहरू नेपालमा लगानीको लागी त्यति उत्सुक देखिन्। अर्थात: नेपाली रुपियाँ को मागमा कुनै ब्रिदी आएको छैन्। त्यस कारणले गर्दा नेपाली रुपियाँ को मुल्यमा कुनै ब्रिधी हुन सकेको छैन्।
बड्दो अष्ट्रेलियन डलर तथा घट्टदो नेपाली रुपियाँ को असर एनआरएन माथि राम्रो तथा नराम्रो दुबै हुन सक्छ। पहिले नराम्रो को कुरा गरौ। खास गरि विद्यार्थी हरूलाई नेपाली रुपियाँ को अवमुल्यनले ठुलो मार्का पारेको छ। उनिहरुले तिर्ने फिस तथा खानु र बस्नु को खर्च मा एक दमै ब्रिदी भएर गएको छ। केही बर्ष अगाडि एक अस्त्ट्रेलिअन डलर बराबर ५० नेपाली रुपियाँ हुन्थ्यो भने हालमा नेपाली रुपियाँ घटेर एक अस्त्ट्रेलिअन डलर बराबर 93 नेपाली रुपियाँ हुन पुगेको छ। अर्थात: नेपाली रुपियाँ को अस्त्ट्रेलिअन डलर को दाजोमा लगभग ८६ प्रतिसतले अवमुल्यन भयेको छ। साथै अष्ट्रेलियन भित्रको सरदर ३ देखि ४ प्रतिसत मुल्य ब्रिधी को पनि लेखा जोखा गर्ने हो भने पाच बर्ष पहिले आउने नेपाली बिद्यार्थीले भन्दा आजभोलि आउने बिद्यार्थीले झन्डै ९० प्रतिसत बडी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
बड्दो अष्ट्रेलियन डलरले गर्दा नेपाल् लगायत अरु बिदेशि मुलुकहरू बाट आउने बिद्यार्थीहरूको संख्या मा निकै कमी आउन सक्ने स्थिति छ। एसको लागि हालै मा अष्ट्रेलियन सरकारका प्रतिनिधिहरू नेपाल् लगायत बिदेशि मुलुकहरूमा यहाँको शिक्षाको प्रोमोसनगर्न गइरहेका छन्।
अर्कोतीर नेपाली रुपियाँको अवमुल्यनले बिदेसमा कामगरि रहेका नेपालीहरू लाई ठुलो फाइदा पुरायेको छ। एक किसिमले उनिहरुको आय बडेर गएको छ। बिदेस बाट थोरै पैसा कमायेर लैजादा पनि त्यो धेरै हुन जान्छ। एसले अबश्यनै नेपाली अर्थतन्त्र लाई ठुलो फाइदा पुरायेको छ।
साथै नेपाली रुपियाँको अवमुल्यनले गर्दा एनआरएन लगानी कर्ताहरूलाई नेपालमा अझ ठुला ठुला प्रोजेक्टहरूमा हाथ हाल्न सकक्षम बनाएको छ। तर उनिहरुले नेपाल् बाट बिदेश फर्कौउने नाफा लाई बिदेशि मुन्द्रामा सटही गर्दा उनिहरुको नाफा को रकम कम हुन जान्छ।
तेस्तै बेदेशमा बस्ने एन्आरएन ब्यापारी हरूले नेपाल् बाट ब्यापारका समानहरू झिकाउदा सस्तो पर्न जान्छ र येसले गर्दा उनीहरू को ब्यापारमा ब्रिधी हुन जाने छ। नेपाल्को एक्स्पोर्टलाई येसले निकै ठुलो साहायता गर्नेछ।
साथै एनआरएनका साथीहरू जो पर्यटन ब्यवसायमा लाग्नु भएका छन् उहाँ हरू लाई नेपाली रुपैयाँ को अवमुल्यन ले साकारत्मक परिणाम ल्याउने छ। घट्टदो नेपाली रुपैयाँ ले गर्दा बिदेशि पर्यटकहरू को लागि नेपाल् एक दमै सस्तो पर्यटकिये देश् हुन गएको छ। यदि नेपाल् मा कनुन र सुरक्षा को राम्रो ब्यबस्था हुने हो भने नेपाली रुपैयाँ को अवमुल्यन ले गर्दा धेरै पर्यटक हरू देश् मा आउन सक्छन्। यस्ले गर्दा नेपाल् को आर्थिक बिकास म ठुलो साघव पुग्ने छ। [email protected]
Previous: युवा बिदेशीनुको बाध्यता – कस्को जिम्मेवारी ?
Next: राष्ट्रपतिको सक्रियता बारे एमालेको आपत्ति